Ao Ginea, mitepo ny fon’i Kônakry sy Télimélé na eo aza ny viriosy Ebola · Global Voices teny Malagasy
Ao Ginea, mitepo ny fon'i Kônakry sy Télimélé na eo aza ny viriosy Ebola
Voadika ny 01 Janoary 2020 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Swahili, Español, Português, bahasa Indonesia, 日本語, Ελληνικά, Français
tovovavy ao Kônakry, nopihani Sebastián Losada – Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Mandravarava ny valanaretina Ebola ary miteraka sahotaka manerana izao tontolo izao. Arahan'ireo sampandraharaha iraisampirenena momba ny fahasalamana maso fatratra ireo olona monina any amin'ny faritra niandohan'ilay valanaretina. Iray tamin'ireo firenea tna voa mafy tamin'ilay valanaretina Ebola i Ginea. Efa nizaka aretina sôsialy marobe i Ginea talohan'io valanaretina io. Na izany aza, manohy miaina ny vahoaka ao aminy ary miatrika amin-kerimpo ny andavanadrony, na eo aza ny loza mitatao, ny alahelo ary ny fijery feno ahiahy ataon'izao tontolo izao. Bilaogera roa no maneho io hery mampiaina io eto ambany:
Nanapaka hevitra ny handeha tao aminà toerana fisakafoanana kely iray tao amin'ny faitra ivelan'i Kônakry, renivohitr'i Ginea i Alimou Sow, Gineàna bilaogera, hihinana pizza miaraka amin'ny vadiny sy namana vitsivitsy. Anaty fomba toa vazivay no itantaràny io zavatra iainana andavanandro ao anatin'ny renivohitra io :
Raha jerena avy ao anatiny, toy ny ahilkiliky ny fiarahamonina ilay firenena. Nihena be mihitsy ny firaondraonan'ny fiaramanidina eny an-danitr'io Kônakry. Nangorona ny entany ireo vahiny, nandao an'ireo faritra fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny hôtely, ny toerana fisakafoanana…. ary ny “bande passante” ety anaty aterineto! Tato anatin'ny fotoana vitsivitsy izao, tena nahagaga fa lasa misosa be ny fifandraisana. Mampilamina be ny fitrohana zavatra ao. Raha jerena avy any ivelany, amin'ny mason'ireo mpampahalàla vaovao – ireo taloha sy ankehitriny – dia tsy misy afa-tsy ranomasimben'ny Ebola izany Ginea izany. Marobe ireo maniboka ny tenany satria matahotra ny ho tratra. Ny ahiahy sy ny fitsaratsarampoana no nisolo toerana ny finamànana, ny firaisankina sy ny fifankahazoana am-po. Azo antoka fa hiditra ao anatin'ny fandaharana amin'ny fanofanana iraisampirenena ny Ebola. Nanokatra toko vaovao ao anatin'io sampana io ilay valanaretina. Miaina anefa isika. Mitepo ny fon'i Kônakry. Mbola ilay saritaka teo hatrany no hita eny ami'ireo lamambe roa lehibe mahazatra : ireo taxis mavo nahazatra, ireo fatinà Magbana misavovona efa mila hihoatra, ilay tabataba mahafaly manome ny gadom-piainan'ireo mponina ao amin'ny renivohitro miaraka amin'ireo anjomaram-piarakodia atatatata, ireo teny mahevy, ny fihogahogan'ireo Coxeurs miezaka ny mamarana ny androtr'iny amin'ny halabotry ataon'dry zareo amin'ireo mpandeha. Rakotra lona ny tseana, maresaka ny trano fisotroana kafe. Mandeha tsy voizina ny fosafosa sy ny valamaty, rivotra mampiaina an'ireo “Conakrykas”.
Cireass, bilaopgera miresaka momba an'i Ginea ihany koa, dia nisafidy ny hampiasa fiteny mivantambatana kokoa mba hanehoany ny heviny momba ilay valanaretina sy ireo fanamby mila ihoarana mba hanentanana ny vahoaka :
Raha misy hadisoana goavana nataon'ireo sasany mpiray tanindrazana amitsika – tsy ny Gineàna rehetra akory no toy izany – tamin'ilay ady atao hanoherana ny tazo mena, dia ny namadihany toedraharaha iray izay tsy misy idiran'n,y ôlitika velively ho lasa resaka pôlitika. Vao nambara fotsny ny fisian'ilay valanaretina, nolavn'izy ireo tanteraka ny fisiany, tsy niezaka akory ny hahatakatra na kely aza. Vokany : Nisy olona nihiakiaka fa lainga izany, tnga nandroba ireo fotodrafitrasan'ny MSF tao Macenta [..] tsy misy olona hahita tombony amin'ny famoronana tantara tahaka izany. Na ireo manampaahefana gineàna, na ireo ONG sy fikambanana iraisampirenena dia samyd tsy afaka hahita tombony amin'ny famoronana valanaretina iray mampivarahontsana tahaka io. Tsy tokony ho ny politika foana no ho hitantsika ao ambadik'izay rehetra ren'ny sofina. Androany, noho ny Ebola, mitoka-monina tanteraka i Ginea eo amin'ny sehtra iraisampirenena. Ny fomba tsara indrindra azontsika atao hamoahana azy amin'ity toedraharaha mahatsiravina misy azy ity, dia ny (miaraka) miady amin'ny Ebola, ilay tena fahavalontsika.
Zavadehibe ihany koa ny hanamarihana hoe ny hazakazaka mankany amin'ny fitsaboana hanoherana ilay viriosy, ny zavamisy hoe ireo tanàna be olona toa an'i Télimélé, dia nahavita nanohitra tsara kokoa an'ilay viriosy raha miohatra amin'ireo hafa izay angamba tsirim-panantenana sy vaovao iray tena iankinan'ny ain-dehibe ho an'ny resaka fikarohana ara-pahasalamàna.
Kamerona 3 herinandro izay